crazy_love 3740 days ago
Hasaune Paree 3739 days ago
Deep 3737 days ago
guchcha chor 3737 days ago
malai chinena 3724 days ago
at_its_best 3678 days ago
crazy_love 3676 days ago
sagun05 3670 days ago
Chanakya Niti 3669 days ago
planB 3666 days ago
Aap bhi Naa 3666 days ago
ThahaChaena 3597 days ago
somewhereondearth 3233 days ago
planB 3233 days ago
Aakinchan 3231 days ago
dipika02 3231 days ago
Birkhe_Maila 3231 days ago
somewhereondearth 3223 days ago
ThahaChaena 3192 days ago
Visitor from US is reading अदितिको साथी
Visitor is reading Property For Sale in Pulchowk, Lalitpur
Visitor from US is reading which one is the best housing option??
Visitor is reading Predict number of seats in the election
Visitor from DE is reading बलात्कार गर्न खोज्नेको लिङ्ग काटियो
Visitor from US is reading Did the vatican create islam?
[VIEWED 29006 TIMES]
Posted on 02-04-11 10:37 PM Reply [Subscribe]
“मलाई अदितिको नङ्ग टोक्ने बानि मन पर्दैन ।” अदितिसँगको मेरो पहिले गुनासो यहि थियो । आज म हजार कोशिस गर्दछु, तर अँह त्यो जस्तो निश्चल मन दुखाई गर्न सक्दिन । त्यस्तो मीठो उजुरी उठ्दैन । भोगाइका एउटा होला, पात्र एउटा होला, घडि एउटा होला तर यहाँ भाव सापेक्षिक हुदाँ रहेछन् । अभ्यस्थ भोगाइका भावना ब्यवसायिक भईदिँदा रहेछन । घटिमा मेरा लागि ।
उ बायोलोजी ग्रुपमा रहिनछे । मोरो अंग्रेजीको क्लास सँगै भएर मनमा निकै घिउ पोखिसकेको थिए । पहिलो मन पराइ, पहिलो माया डरलाग्दो हुन्छ । रन्कोमा कसो म फिजिक्स ग्रुपमा सरुवा भइन । हुन त नगएर पनि लछारपाटो केहि लागेन । ‘बायोलोजी’ पढ्ने सबै डाक्टर कहाँ भएदिदाँ रहेछन र । एक हेराइ मनग्गे थियो, अदिति मन परिन् । माया लागे जस्तो भयो । शुरुमा English class मात्र थियो । बिस्तारै ल्याब रिपोर्ट, physics tuition, क्यान्टिनका खाजाले मेरो मायाका डोरा बाट्दै गए । झन हेर्यो झन माया लाग्ने । अल्लारे बैंश अनि बैंशको सपना, म निकै पुलकित थिए ।
टोलाएको हेराइ र ओल्सिएको बोलाइले मात्रै मायालुका मनमा माया प्रसारित हुने भए संसार अर्कै हुन्थ्यो होला । यहाँ ब्यक्त नभएका माया कतिले नै पो बुझ्दछन र! संसार किन पो सजिलो भएदिन्थ्यो । २० भन्दा अगाडि कोहि मन पराउनु, मन पर्यो भनेर भन्नु, केहि प्रयास पछि जवाफ पाउनु एउटा मेलो । तर मनपरेकि केटीलाइ आफ्ना धेरै जसो साथीभाइले मन पराउनु, दुइ-चार ले चाँहि उहि सामु गएर भनि टोपल्नु अनि त्यस्ता मायाका अनेक प्रस्ताव खाएर थेत्तरी भएकि केटीलाई आफ्नो बनाउनु चाँहि ठाडो भिर जोत्नु भन्दा गाह्रो । तर बैशंको आँट नै बेग्लै, माया बेग्लै अनि मायाका कसरत बेग्लै । म बिना प्रयास हार किन पो स्वीकार्थे !
मैले निकै तयारी गरे । पहिले माया हार्ने आँट कसको हुन्छ र! अदितिका काकालाई नमस्कार ठोकियो, उसका साथीको बस भाँडा तिरियो । कलेजका बाटा फेरिए । दौंतरीका गुनासा खेपिए । अनेक तान बुनियो । म माया जित्ने दौडमा थिए, निकै ब्यस्त थिए ।
दिन आयो, मौका आयो । अदितिका नजानिदा इशाराले हौसला दिए । मैले आँट जुटाँए । तपशिल काटेर भन्दा उनले लजाएर स्वीकारिन् । म पास भए ।
मायाको स्वीकारोक्ति बढो अफ्ठेरो अनुभव थियो । एकोहोरो पिरोलिएको अल्लारेलाई मायाले हुन्छ भनिदिदाँ नचाहिंदो हलुंग्गो भयो । न आकाश, न धर्ति केवल मायाको स्वीकारोक्ति मात्र बाँकि हुँदो रहेछ । एउटा असहज निर्वाण पाए मैले । तर त्यो अनुभव क्षणिक मात्र । पलभरमै बर्षिने अनेक जिम्मेवारी थिचेर जस्ताको त्यस्तै । आखिरमा बच्ने सावाँको संघर्ष ।
मोरो आई एस्सी, सकियो । उनि फिजिक्स ग्रुप, ‘प्रोग्रेस’ तिर लागिन् । आफू ‘नेम’ धाइयो । भेटघाट केहि कम भयो, स्वभाविक थियो । एन्ट्रान्स कोचिङ्गका दिन चल्दै गए । फुर्सद अनुसार अदितिसँग भेट हुन्थ्यो । बाँकि संसार ‘नेम’ मै आउँथ्यो । समय चलेकै थियो । केहि महिना पछि कोचिङ्ग सकियो । उनले इन्जिनियरिङ्गको पढाइ थालिन ।
बैंशमा हजार तान बुनेर मायाको संघर्ष जित्नु एउटा कुरा । तर महाराजगन्जको एन्ट्रान्स मा २-२ चोटी पछारिएर बैक्लपिक पढाइ रोज्नु अर्कै कुरा । मेरो पीर दीप श्रेष्ठकै भाकामा सँग मिलेको थियो ।
उपाए थिएन, मैले पनि शुरु गरे “इन्जिनियरिङ्ग” ।
Posted on 02-13-11 11:46 AM [Snapshot: 1268] Reply [Subscribe]
उसले मलाई दिएका material मा नचिनेका अक्षर देखे । मनमा चस्स भयो ।
यो सोमेको चित्त कति सानो हो? त्यति जाबो नचिनेको handwriting देख्दा पनि चस्स हुने, केटाहरु कति शंकालु है?
ल ल पढ्दैछु है म पनि।
Posted on 02-14-11 11:06 AM [Snapshot: 1425] Reply [Subscribe]
it's getting interesting more and more...
Posted on 02-15-11 3:57 PM [Snapshot: 1544] Reply [Subscribe]
सुन्दरीको स्पर्श सम्झाउने जस्तो प्रस्तुती रे छ। प्रभो -- जाओस जाओस।
Posted on 02-15-11 8:29 PM [Snapshot: 1637] Reply [Subscribe]
सारै राम्रो कथा...
fucheketo ले भने झैँ ...यो कथामा धेरै ले आफूलाई भेट्नेछन् म पनि आँफैलाई खोज्दैछू कहिले कुन हरफमा कहिले कुन हरफमा ...
Posted on 02-28-11 9:13 PM [Snapshot: 2215] Reply [Subscribe]
somewhere ji ,
baki bhag kahile aaucha .. pratikchya ma chu
Please log in to subscribe to at_its_best's postings.
Posted on 04-15-11 9:01 PM [Snapshot: 3100] Reply [Subscribe]
सोमजी का शब्द एती सरल र सहज हुन्छनकी ति मनका कुना कन्दराबाट बगेर दिमागको एउटा तलाउमा गएर ताल परेर बस्छन। मरी जाउ , तर त्यो ताल धेरै लामो समय सम्म सुक्दैन।
Posted on 04-18-11 8:01 AM [Snapshot: 3282] Reply [Subscribe]
Posted on 04-24-11 11:39 AM [Snapshot: 3542] Reply [Subscribe]
Next part Pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...!
Posted on 04-24-11 10:12 PM [Snapshot: 3703] Reply [Subscribe]
Earth has magnetic attraction, biology just starting to show it's feeling, keep going, NAME and ProgreSs days still in minds, like it, and waiting, it's like waiting for the next season of Walking Dead
Posted on 04-24-11 10:13 PM [Snapshot: 3703] Reply [Subscribe]
Posted on 04-27-11 4:35 PM [Snapshot: 3939] Reply [Subscribe]
so are you not going to post the other parts ?
Posted on 04-27-11 5:06 PM [Snapshot: 3955] Reply [Subscribe]
Yahan ko prastuti ma nikai mithas cha, saralta cha ....tara pani mayako bhanda yahan le lekhnubhayeka sabda ra tyas sabda bata baneka nadi bhane nikkai nai saanglo payeko chu... ahilay sammako aadhyayama Aditi malai kamai maan pareki che, saayad yahanle unko barema kamai lekhnu bhayo hola... aaja badi Aditi ko barema jaanna chaheko chu.. ...
Posted on 07-05-11 4:21 PM [Snapshot: 4706] Reply [Subscribe]
Khai ta som-ji baki ansha pani padhna paye huney . Hajur ka saral tara hridayesparshi haraf ma aafailai jod-dai gaye , kasto majja le bagaaunu bhayo yaha samma , chadai aru pani padna paye huney.
Posted on 07-04-12 1:45 AM [Snapshot: 7012] Reply [Subscribe]
(छोडेको लामो भयो, आशा छ कथालाई अन्याय भएन होला!)
ति अक्षरहरु नचिनेका मात्र थिएनन् । त्यहाँ शब्दहरु थिए, बाक्यहरू थिए, संवादहरु थिए । त्यहाँ छेडाइ हरु थिए, मस्काइहरु थिए । मैले ति अपरिचित लेखाइमा माया जित्न गरिने परिचित दाउहरु देखे, बुन्दै गरेका घरहरु देखे । म कसरी चिन्दिन थिए होला र, ति सबै अनुभवहरु मेरा अंश-अंशमा थिए ।
अदिति त्यो साथीका कुराहरु सुनाउन थालि । जान्ने मान्छे, गुरुवर्गको प्यारो, मिजासिलो, सहयोगी आदि-आदि । उसका प्रतिभाहरु पनि कति हुन् । म मनबाट आफैंसँग कमजोर हुन थाले । अदितिका बातमा सँधै उसको साथी हुँदैन थियो, तर पनि म घरि-घरि ति बातमा उसलाई खोज्दथे ।
अदितिले इन्जिनियरिङ्ग सकि, म चौंथो बर्षमा पुगें । इन्जिनियरिङ्गको एउटा औषत विद्दार्थीले चार बर्षमा पाठ्याक्रम मात्र पढ्दैन, समाजका दाउपेच पढ्छ । परिक्षाका साथै जीवनका समस्या सामना गर्न सिक्छ । अनि तिनबाट पछारिदा, उठ्न सिक्छ, तिनलाई छ्ल्न सिक्छ । म पनि सिक्दै गए, व्यवहारमा छिप्पिदै गए ।
ब्यक्त अब्यक्त मायालाई जीवन सुम्पिने आँट मायाको एउटा अध्याय हो । तर मायाका सबै पोटीहरु सगरमा हुँदैनन् । कति मनको खाडलमा बसिदिन्छन्, कतिले सपना बिझाउँछन् । यी सबै अनुभवलाई पचाएर मायालुलाई मनको सगरमा राखिराख्नु मायाको अर्को अध्याय हो । मैले त्यहि जान्दै थिए, त्यहि बुझ्दै थिए ।
अग्लो केटो, छोटो कपाल, फोस्रो जिन्स, हलुका भाषा आदि । उमेरले-व्यवहारले एउटा घुम्ती काटेपछी लवाइको खासै महत्व हुँदैन। उसले पनि त्यो बुझिसकेको पाए । अदितिले हाम्रा व्यक्तित्व जोड्ने प्रयास गरि । उ हामीलाई समभुज बनाउन खोज्दै थिई, तर म भावनाका विषमकोणमा उभिएको थिए । त्यसैले त्यो सम्भव भएन । म उसँग गह्रौं नै भइदिए ।
Posted on 07-04-12 2:38 AM [Snapshot: 7063] Reply [Subscribe]
suchanice nice story...
Posted on 07-06-12 12:41 AM [Snapshot: 7402] Reply [Subscribe]
<<< बनाई सकेको बिम्ब फोर्नै सकिदैन । अनि हाम्रा ब्यवहारहरु चोखा हुँदैनन् >>>
मनकै कुरा लेख्नु भो
<<<संघर्षले सम्बन्धहरु, सम्बन्धका निर्णयहरु कस्तो सम्म प्रभाव पार्छन् भने हाम्रो बिवाह एउटा “विकल्प” को रुपमा उभियो>>>
प्रभो हाम्रो मात्रै हो कि एस्तो अवस्था सबैको आउछ ???
<<<मायामा त्याग पनि हुन पर्दछ । मेरा विचारले यस्तै दिशा लियो>>>
किन सबैको विचार तेस्तै हुन आउछ ???
प्रभो, धेरै पछी कथा पुरा गर्नु भो... सारै मन छोयो, लाग्यो आफ्नै कथा हजुरले लेखिदिनु भो.. के गर्नु माया लगेर र लगाएर मात्रै नहुने रैछ ...फेरी फेरी पनि येस्तई पढ्न पईयोस ...
Posted on 07-06-12 10:03 AM [Snapshot: 7576] Reply [Subscribe]
निकै लामो समय पछी हजुरको लेख पढेँ। बिहानिको सिर्सिरे बतासले उही पुरानो सुगन्ध अनी उही ताजापन बोकेर ल्याएको अनुभव भयो।
"इन्जिनियरिङ्गको एउटा औषत विद्दार्थीले चार बर्षमा पाठ्याक्रम मात्र पढ्दैन, समाजका दाउपेच पढ्छ । परिक्षाका साथै जीवनका समस्या सामना गर्न सिक्छ । अनि तिनबाट पछारिदा, उठ्न सिक्छ, तिनलाई छ्ल्न सिक्छ "---- साह्रै चित्त बुझ्यो।
अरु पनि सुनाउदै गर्नु होला।
Posted on 07-06-12 11:59 AM [Snapshot: 7635] Reply [Subscribe]
""छोडेको लामो भयो, आशा छ कथालाई अन्याय भएन होला!""
यो धागोमा ढिलो नै सहि, न्याय मिल्दोरेछ! आशा छ अब न्यायको सिलसिला निरन्तर रहन्छ!
Posted on 07-13-12 1:48 PM [Snapshot: 8018] Reply [Subscribe]
Posted on 08-13-12 6:55 PM [Snapshot: 8552] Reply [Subscribe]
अस्तिना पुरागर्नुस न भनेर गरेको तर व्यस्तताले पढेकै थिइन , आज पुरा गरें . सारै मार्मिक.... सारै मीठो......
हजुरका अरु लेखको र साझाका केहि राम्रा लेखहरु को एउटा सानो धागो बनको छु फुर्सद भए हेर्नु होला है . कृपया अझै लेख्दै गर्नुस न है .
यो लाइन सारै घत लग्यो
"....... भाकल नपुग्दा ईश्वरको अस्तित्वलाई त शंका गरिन्छ, झन म त मायालु भन्दा एक कक्षा तल बाँचेको प्रेमी ।..."